Infographic: antontan'isa momba ny haino aman-jery sosialy 21 mila fantarin'ny mpivarotra rehetra amin'ny 2021 | Martech Zone
Tsy isalasalana fa mitombo isan-taona ny fitaoman'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fantsom-barotra. Mipoitra ny sehatra sasany, toa ny TikTok, ary ny sasany mijanona saika hitovy amin'ny Facebook, izay mitarika fiovana miandalana amin'ny fitondran-tenan'ny mpanjifa. Na izany aza, efa an-taonany ny olona no zatra marika naseho tao amin'ny media sosialy, noho izany ny mpivarotra dia mila mamorona fomba vaovao hahatratrarana fahombiazana amin'ity fantsona ity.
Izany no mahatonga ny fijerena ny fironana farany izay zava-dehibe amin'ny matihanina amin'ny marketing. Izahay ao YouScan nanapa-kevitra ny hanatsotra ity asa ity ho anao ary nanomana infografika misy zava-misy sy antontanisa toy ireo karazana atiny tianao amin'ny sehatra samihafa, fitondran-tena amin'ny Internet, fampitahana amin'ny sehatra maro samihafa.
Antontan'isa momba ny horonantsary sosialy:
Amin'ny 2022, 84% amin'ny atiny rehetra ao amin'ny media sosialy no haseho ao Video.
51% ny marika efa mampiasa horonan-tsary fa tsy sary ao amin'ny Instagram.
34% ny lehilahy ary 32% ny vehivavy mitady horonan-tsary fanabeazana.
40% n'ny mpampiasa no te hahita bebe kokoa renirano misy marika.
52% amin'ireo mpampiasa no tia mijery Horonantsary 5-6 minitra arakaraka ny lampihazo.
Antontan'isa momba ny atiny media sosialy:
68% n'ny mpampiasa no mahita votoatin'ny marika mankaleo ary tsy manintona.
37% amin'ireo mpampiasa haino aman-jery sosialy no manakodia ny feed tadiavina vaovao. 35% ny mpampiasa no mitady fialam-boly.
Memes nihoatra ny emoji sy ny GIF amin'ny lazany ary ankehitriny dia fitaovana fampitaovana voalohany amin'ny Internet.
Ny votoatin'ny fialamboly no antony voalohany ampiasaina TikTok.
Antontan'isa momba ny mpanjifa sy haino aman-jery sosialy:
85% of TikTok mampiasa ihany koa ny mpampiasa Facebook, na 86% amin'ireo Twitter mavitrika ihany koa ny mpijery Instagram.
45% n'ny mpampiasa manerantany no mitady marika amin'ny tambajotra sosialy kokoa noho ny amin'ny fikarohana.
87% amin'ireo mpampiasa no miaiky fa nanampy azy ireo hanao haino aman-jery sosialy levitra fanapahan-kevitra.
55% amin'ireo mpampiasa no manana entana nividy mivantana amin'ny sehatra media sosialy.
Antontan'isa momba ny fampahalalam-baovao sosialy:
$ 1.00 isaky ny laniana amin'ny fananganana fifandraisana amin'i influencers mamerina eo ho eo $ 5.20.
50% of Twitter ny mpampiasa dia efa nividy zavatra iray taorian'ny nifandraisany tamin'ny bitsiky ny influencer.
71% -n'ny mpampiasa no manao fanapahan-kevitra mividy mifototra amin'ny tolo-kevitra influencer amin'ny tambajotra sosialy.
Mpandray anjara amin'ny micro 17.96% ny tahan'ny fifamofoana tao amin'ny TikTok, 3.86% tao amin'ny Instagram, ary 1.63% tao amin'ny YouTube, niteraka fifandonana betsaka kokoa noho ny Mega-influencer izay nanana tahan'ny fifandonana 4.96% tao amin'ny TikTok, 1.21% tao amin'ny Instagram, ary 0.37% tao amin'ny YouTube.
Antontan'isa momba ny sehatra media sosialy:
37% ny mpampiasa TikTok manana fidiram-bola ao an-trano $ 100k + isan-taona.
70% amin'ny tanora no matoky YouTubers manaraka izy ireo, mihoatra ny olo-malaza rehetra.
6 avy tany 10 Mpampiasa YouTube dia mety hanaraka ny torohevitr'i vlogger kokoa fa tsy mpampiantrano amin'ny fahitalavitra na mpilalao sarimihetsika rehetra.
80% ny olona liana amina vokatra iray mividy rehefa avy nijery hevitra tao amin'ny YouTube.
Amin'ny taona 2020, ny tahan'ny fifamofoana amin'ny Instagram nitombo 6.4%. Mandritra izany fotoana izany dia latsaka ny isan'ny lahatsoratra amin'ny fahana Instagram: marika maro no niova hamoaka tantara maro kokoa.
Momba ny YouScan
YouScan dia sehatra fitsikilovana haino aman-jery sosialy ampiasain'ny AI miaraka amina fahaiza-manao amam-panao sary. Manampy ireo orinasa izahay handinika ny hevitry ny mpanjifa, hahita fomba fiasa azo tanterahina ary hitantana ny lazan'ny marika.
Tags: 2021CiscoFacebookInstagraminfluencer megamegainfluencermicro-influencermicroinfluencerzava-misy eo amin'ny media sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialystatistikan'ny media sosialystatistikan'ny media sosialyTikTokTwitterfitorahana bilaogy videovloggingSocail isikayouscanYouTubeyoutuber